Abalandeli bePoltava bamisela ibhola yaseUkraine | TeraNews.net
Abalandeli bePoltava bamisela ibhola yaseUkraine
umbhali ubugcisa Papashwe ngomhla 01.10.2018
Abalandeli bePoltava beFC Vorskla bazimisele ngokuqinileyo abadlali bebhola ekhatywayo base-Ukraine kwibala lezemidlalo. Kumdlalo webhola ekhatywayo kunye neDesna ePoltava, abalandeli babonisa izikipa ezibonisa umfanekiso ka-Adolf Hitler.
"Utat'omkhulu ngumculi wase-Austrian" - abalandeli batsho kwi-T-shirt enemifanekiso yenkokeli yeJamani yamaNazi ngexesha leMfazwe yeHlabathi ye2. Abalandeli bawela ngoko nangoko kwiilensi zeekhamera zikamabonwakude, kwaye iifoto kunye neevidiyo zeesimboli ezingavumelekanga e-Ukraine zawa kuyo yonke imithombo yeendaba yehlabathi.
Umdlalo enkundleni wawuphela ngokuphumelela iPoltava ngenqaku 2: 0. Kodwa abadlali abanalo uvuyo, kuba i-FC iphantsi kompu wekomiti yoluleko ye-UEFA, ecwangcisa ukufaka isohlwayo kwiklabhu. Kutshanje, ngenxa yomsebenzi wabalandeli abasebenzisa i-pyrotechnics kwibala lemidlalo, icala laseUkraine lawela kwi-35 amawaka eerandi.
Kuyabonakala ukuba abalandeli bePoltava babefuna ukuphinda babethe umphefumlo kwibhola yaseUkraine. Sinethemba lokuba abalandeli abayi kuphosela amaqhinga amatsha kwi-Europa League, apho i "Vorskla" iya kulwa nePortugal "Sporting".